Sida loo rakibo OS X El Capitan adoon lahayn xisaab xir sameeye | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo rakibo OS X El Capitan iyada oo aan la helin koontada horumariyaha
Jordi Gimenez | | Mac OS X, OS X El Capitan, Tababarada
Mid ka mid ah su'aalaha igu soo dhacaya ayaa ah haddii aan u adeegsan karno OS X El Capitan beta 1 nidaamka qalliinka ugu weyn jawaabtayduna waa isku mid sidii had iyo jeer, waxaa fiican inaad sugto nooca rasmiga ah. Haa, hadda waxaan arki doonnaa sida loo rakibo OS X El Capitan beta qaab aad u fudud oo aanad horumariyaha ka ahayn Mac-dayada, laakiin taladaydu waxay tahay in haddii ay tahay inaad la shaqeyso Mac, ha rakibin nidaamkan qalliinka. iyada oo ah tan ugu weyn ee ay ugu wacan tahay is-waafajinta suurtagalka ah ee aad ka heli karto, abuuri qayb cusub ama aad sugto inta lagu bilaabayo hab sugan oo aan sidaa u sii dheerayn.
Haddii xitaa la-talin shaqsiyadeed la sugayo nooca rasmiga ah waxaan dooneynaa inaan rakibno OS X El Capitan, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo aqoon hore: DiskMaker x iyo a 8GB USB wuxuu ku foogan yahay Mac OS Plus (Safar). Horta waa keydi keydkeena Mac, ama leh Mashiinka Waqtiga ama kaas oo aad doorbideyso, qaabkan haddii aan dhibaato la kulanno waxaan mar walba heli doonnaa keyd amni.
Tallaabada xigta waa soo dejiso OS X El Capitan, ku samee qayb ka mid ah darawalkayaga adag ama isticmaal mid dibedda ah si loo fuliyo rakibaadda. Hadda waxaa la joogaa waqtigii la raaci lahaa casharka caadiga ah qalabkan weyn ee aan horay ugu soo aragnay.
3 Ku rakibidda OS X El Capitan beta
Abuur rakibiyaha si fudud adigoo raacaya talaabooyinka.
Waxaan ku xirnaa Mac the USB ama kaarka 8GB SD in la sii wado rakibaadda. USB / SD-kan ayaa si joogto ah loo tirtirayaa sidaa darteed way fiicnaan doontaa in la faaruqo si looga fogaado dhibaatooyinka dambe. Waxaan bilaabaynaa DiskMaker y dhagsii ikhtiyaarka rakibi OS X Yosemite (Haddii aan caddeynno inay tahay El Capitan laakiin uma muuqato DiskMakerx) in aan horey ugu soo dejinnay Mac-keena galka codsiyada ama meel kasta oo aan ku haysanno - markaa waxay na weydiin doontaa lambarka sirta ah, waan gelinnaa iyo dhagsii sii wad.
Hadda waxaa la joogaa waqtigii la sugi lahaa hawsha inay dhammaato oo haddii ay xoogaa aamusnaato, waa iska caadi. Si kastaba ha noqotee xiro barnaamijka, barkinta USB / SD ama dami qalabka kahor inta uusan dhamaan. Marka aan dhammeyno waxaan bilaabi karnaa habka rakibida mashiinkeena.
Ku rakibidda OS X El Capitan beta
Hadda waxaan ku xirnaa USB-ga Mac-ga oo damineynaa Mac-keena leh USB / SD oo ku xiran. Waxaan dib u bilaabaynaa mashiinka adigoo riixaya furaha Alt si menu-ka bilowgu u muuqdo, waxaan doorannaa xusuusta USB, diskka ama kaarka SD meesha aan ku leenahay rakibayaasha OS X El Capitan oo guji. Hadda waa inaan raacnaa talaabooyinka rakibaadda ee ku saabsan qaybta ama diskka aan dooneyno oo aan bilowno rakibidda OS X El Capian oo leh tallaabooyinka la tilmaamay.
Waad uga tagi kartaa wixii su'aalo ah faallooyinka waxaanan isku dayi doonaa inaan xallino, laakiin nidaamka ayaa aad u fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » OS X El Capitan » Sida loo rakibo OS X El Capitan iyada oo aan la helin koontada horumariyaha
Xagee laga soo dejinayaa OSX El Capitan?. Ujeeddadaydu waa inaan ku abuuro mashiin casri ah Isbarbardhiga oo halkaas ku rakib.
Ku jawaab rakvi23
AnDayaanna  (@xDayaannax) dijo
haddii aad tijaabinayso beta-ka cusub ee OSX El Capitan - u kala qaybi diskka la isticmaalayo ama ku samee disk kale .. laakiin ha u istcimaaalin cusbooneysiinta disk-ka weyn .. hana u isticmaalin Koontada 'iCloud' midkoodna .. tani waa sababta oo ah shaqooyinka qaarkood Waxay kaliya u heli doonaan iOS9, iyo mac OS 10.11 .. oo haddii ay cusboonaysiiyaan waxyaalahan hadda ma awoodi doonaan inay mar dambe ku adeegsadaan Yosemite ama Mavericks iyadoo kuxiran meesha ay joogaan. tusaale .. Qoraallo waa waxa aan u arko digniin ahaan iOS9.
Wax la mid ah ayaa ku dhacay iCloud Drive ... hadda kaliya ayaa loo heli karaa Yosemite iyo ka hor inta aysan suurtagal ahayn in loo isticmaalo dhammaan OSX-da kale, haddii aad cusbooneysiisay mar dambe looma isticmaali karo macs-yada leh Mavericks ama wixii ka horreeyay.
Jawaab an Cristian  (@ccontreras)
Waa salaaman tahay, waxaan isku dayay inaan rakibo OS X El Capitan oo aan ka soo bilaabo xoqitaankiisa, bilowga rakibaadda waxay weydiineysaa aqoonsikeyga Apple, waan dhigay laakiin waligey ma aqoonsan doono eraygeyga sirta ah, ka dib isku daygii saddexaad ee Apple uu xannibay oo ay tahay inaan furo kombiyuutar kale, laakiin weli waa isku mid. Waxaan sidoo kale isku dayay inaan rakibo internetka la'aan laakiin taasi iima oggolaaneyso. Wixii fikrad ah maxaa dhici kara ??? Waad ku mahadsantahay kaalmadaada.
Ku jawaab Jonny Palazuelos
Haye Jonny, ma leedahay koonto horumariyaha? Haddii kale, uma baahnid Aqoonsiga Apple gabi ahaanba, waxa loo baahan yahay waa lambarka sirta ah ee maareeyaha Mac.
Waxaan ku sigtay inaan dhammeeyo rakibaadda daaqaduna isu beddeshay caddaan oo kaliya xulashooyinka "gadaal" iyo "horay" ayaa u muuqda, horay ayaan u riixayaa waxna ma dhacaan, maxaan sameyn karaa?
Jawaab Erick Navarro
Waa macquul in OS X aad rakibtay ay wax ka qaldan yihiin. Way fiicantahay in laga bilaabo xoq iyo qalab kale.
Dhibaato weyn ayaa i haysata, waxaan soo maray dhammaan talaabooyinka oo waxaan u qaabeeyay Mac-kayga ... Goormaana waxay ahayd goortii aan damin lahaa oo aan soo celin lahaa ... Adoo riixaya Alt ... Qalabka aan ku sameeyay kumbuyuutarkeyga 8G I aqoonso ... Iyada oo Diskmaker X ah ... Xal ma leeyahay?
Waad dib u soo dejisan kartaa OS X El Capitan laakiin markan waxaad ka soo qaadan kartaa nooca rasmiga ah ee horeyba looga heli karo Mac App Store Mac kale oo saaxiibkiis / saaxiibkiis ah ama isku day tan oo ah inaad kala soo baxdo OSX khadka tooska ah.
Salaan kadib noo sheeg
Waxaan isku dayay inaan rakibo macruufka macruufka laakiin wuxuu iga codsadaa koontadayda Apple-ka, anigaa dusha iska saaray mana ii oggolaan doono inaan rakibo. ma xasuusto akoonkooda, sideen ugu shubi karaa nidaamka qalliinka?
Miyaad u maleyneysaa in MacBookga cusubi uu ku guuldareystay isku xirnaanta?, OWC waxay ku dhawaaqeysaa mustaqbalkeeda USB-C ee leh dekedda 11